Vane Vatasvi vemabhiza Ekutanga | Martech Zone
Chitatu, Kukadzi 18, 2009 Chipiri, Gunyana 7, 2014 Douglas Karr
Ndanga ndichishanda mukutangisa kweanenge makore gumi ikozvino. Mukutarisa kubudirira nematambudziko ezvekutanga zvandakashandira, kazhinji vanamuzvinabhizimusi avo vaimbobudirira vanoenderera mberi kune yavo yekutanga kutanga. Ini ndinotenda pane zvinhu zvina izvo vatangi vekutanga (uye vanamuzvinabhizimusi) vanofanirwa kudzivirira kana vachida kurarama.
Vane Vatasvi vemabhiza Ekutanga:
mbayo - Ndinogona kusvina mari yakawanda, nekukurumidza.
Hubris - Ini ndichave chikonzero chedu kubudirira mune ramangwana.
Kuziva - Ini handidi kuteerera, ndinoziva zvirinani.
Dominance - Ndinoziva zvirinani, ini ndichakuudza kuti ungazviita sei.
Kubudirira kwekutanga hakuna kuvakirwa pana "Ini", uye hakuna kuvakwa pamazano nemari. Kubudirira kwekutanga kunovakwa netarenda risinganakidze revaya vari padyo neiyo munhu anoda kubetserwa, ivo tariro, Kana dambudziko.
Zvinotora vashandi vakakosha kuti vafambe nhanho inoda kutanga. Unoda mubatanidzwa wevasimudza nema pusher… vashandi vanobata zvese kumusoro uye vashandi vanosundira vanhu kumberi.
Ini ndakakomborerwa kutenderedzwa nevamwe vashandi vane tarenda zvisingaite izvozvi kubasa. Kuona kufambira mberi mumaawa nemazuva panzvimbo pemwedzi nemakore kunenge kuchikurudzira kune chero hombe kambani.
Ini ndazviona pekutanga - ese ehunhu hwaunotsanangura - sarudzo dziri mumaoko evashoma uye dzakapihwa kunze zvishoma uye timu inobatwa serubatsiro rwakabhadharwa ... mutungamiri wechidiki asingakwanise kukanda mapfumo pasi achitenda kusakanganisa kwavo. , kusateerera kune vanhu vane makore akawanda eruzivo rwezvakasiyana-siyana, uye kuraira mirairo, kugadzira nharaunda yekuzvidavirira, asi kusava nehanya uku uchidzora kusatya uye kuunza chimwe chinhu chiri pedyo ne "akarohwa mukadzi" syndrome.
Hongu, ndazviona zvese izvo zvinhu. Uye makambani iwayo akazokundikana. Rombo rakanaka nekutanga kwako, ndinovimba kune ramangwana riri nani.
Ichokwadi. Ava 4 "vatasvi vemabhiza" sezvaunotaura vanogona kuuraya. Kuve muindasitiri iyi, handinzwisise kuti sei vanhu vazhinji vachifunga kuti zviri nyore.
Ndiise kupeji yekutanga yeGoogle. Ndinoziva kuti makambani ari kuita mari mukutengesa kwepamhepo, ndingatengesa sei yakawanda izvozvi? Ndichangobva kuvhura Webhusaiti yangu mazuva maviri apfuura, nei isiri kuwana traffic yakawanda?
Nokuda kwechimwe chikonzero, munhu wose anofunga kuti zvinhu izvi zvinongoitika pasina kuedza. Unovabata nezvekuvandudza webhusaiti yavo uye ivo "havana nguva" asi zvese izvi zvinhu zvinongofanirwa kuitika nemashiripiti.
Vanoda kubva papoint A kuenda kunongedza Z pasina chavari kuita pakati. Ibasa rakaoma. Hauna mhinduro dzese. Ndicho chokwadi chazvo. Zvino isai hurongwa hwekuita kuti zvinhu zviitike. Kana iwe uchida kupfuma nekukurumidza, enda uedze imwe yeaya infomercial paterevhizheni yehusiku. Rombo rakanaka nazvo. Tichange tichiri pano tichishandira kure kana izvo zvakundikana zvakare.